Izilinganiso Zomkhiqizo We-Shopper Zithinta Kanjani Abathengisi be-AdWords | Martech Zone
I-Google ikhiphe isici se-AdWords ngasekupheleni kukaJulayi ukusiza abathengi benze izinqumo zokuthenga ezinolwazi. Izikhangiso Zokufakwa Kuhlu Kwemikhiqizo (i-PLA) kuyo yonke i-Google.com ne- Ukuthenga kwe-Google manje izoba nomkhiqizo noma izilinganiso zokuthenga zeGoogle.
Cabanga nge-Amazon futhi yilokho kanye ozokubona lapho usesha imikhiqizo namasevisi ku-Google. Izilinganiso zomkhiqizo zizosebenzisa isistimu yokulinganisa izinkanyezi ezi-5 ngokubalwa kokubuyekezwa.
Ake sithi usemakethe yomakhi omusha wekhofi. Lapho usesha i-Google ngomkhiqizo, imiphumela izokunikeza uhlu lwemikhiqizo etholakalayo kanye nezilinganiso zayo nokubalwa kokubuyekezwa. Lesi sici esisha sezikhangiso zeGoogle siyatholakala kubathengi e-United States okwamanje.
Izilinganiso Zomkhiqizo Zisiza Kanjani Abathengi
Kubathengi, inzuzo isobala impela. Ngokulinganiswa okuhlukaniswa kahle kwemikhiqizo nezinsizakalo, izinqumo zokuthenga zingase zibe nolwazi oluningi futhi zingaphothulwa ngokushesha okukhulu. Abathengi akudingeki badlule kuzo zonke izibuyekezo ukuthola ukuthi umkhiqizo othile uhamba kanjani nabanye abathengi.
Imininingwane ebucayi esiza abathengi ukuthi banqume kulula ukuyithola. Asikho isidingo sokuthi abathengi benze olunye usesho ngoba ukubuyekezwa komkhiqizo kukhona lapho kuzikhangiso zohlu lomkhiqizo ngenxa yesici esisha se-AdWords.
Izilinganiso Zomkhiqizo Zibathinta Kanjani Abathengisi
Ngaphezu kwalokhu isici esisha se-AdWords esenzela abathengi, izilinganiso zomkhiqizo kukholakala ukuthi ziwusizo kubathengisi ngezindlela eziningi. Ngemikhawulo yokubeka imikhiqizo nezinsizakalo ngaphandle kosesho lwe-Google, Izikhangiso Zokufakwa Kuhlu Kwemikhiqizo zingasiza ukukhiqiza abathengisi abafaneleka kakhudlwana. Ukuhlolwa kokuqala ku-beta futhi kukhombisa ukukhuphuka kwamaphesenti ayi-10 kumanani wokuchofoza kuzikhangiso zohlu lomkhiqizo.
Ukucacisa ngokuqhubekayo, ake sibuyele esibonelweni sethu sokwenza ikhofi. Lapho usesha into ku-Google.com noma ku-Google Shopping, lokho abathengi abazokubona uhlu lwemiphumela yokuthenga exhasiwe. Into eyodwa ingaba nesilinganiso sezinkanyezi ezine ngezibuyekezo zomsebenzisi ezingama-230. Enye enesilinganiso sezinkanyezi ezingu-4.5 ngezibuyekezo ezingu-3,427 njalonjalo. I-Google iqhubeka ngokuhlukanisa izinto zibe Edume kakhulu futhi nabantu bacabangele.
Lapho abathengi bachofoza izilinganiso, baqondiswa kabusha ewindini elisha lapho kunemininingwane eminingi ngesilinganiso. Umbiko ojulile ungafaka imininingwane efana nensizakalo yamakhasimende, ukuphatha izimangalo, izaphulelo, izindleko, ukuthenga kalula, ikhwalithi yewebhusayithi futhi, ukwaneliseka okuphelele. Futhi okufakwe kuleli windi isixhumanisi ekhasini lasekhaya lomthengisi elandisa amathuba okuchofoza.
Izilinganiso zomkhiqizo we-AdWords, ngamafuphi, zinikeza abathengisi enye indlela yokugqama emncintiswaneni ngenkathi inyusa amaphesenti we-CTR futhi ekugcineni izuzisa.
Lapho iGoogle ithola khona idatha
Ukusiza abathengi benze izinqumo ngezilinganiso zokuthenga ze-Google ngenkathi kukhulisa ukuvezwa komkhiqizo wakho ne-CTR konke kuhle. Kepha zilinganiswe kangakanani izilinganiso? Ivelaphi idatha yezilinganiso?
Ngokusho kwe-Google, isilinganiso somkhiqizo ukuhlanganiswa kwedatha yokulinganisa nokubuyekeza kusuka emithonjeni eminingi. Izilinganiso zingaqhamuka kubathengisi, abasebenzisi, abahlanganisi bezinkampani zangaphandle namasayithi wokuhlela ahlanganiswe ndawonye ukukhombisa ukumelwa okuhlanganisiwe kwesilinganiso esishiwoyo.
Idatha, ngamanye amagama, ivela ikakhulu ku- Inhlolovo yabathengi be-Google okuyindlela yenjini yokusesha yokuthola impendulo yabathengi. Izilinganiso zokugcina ezikhonjiswe kumiphumela yosesho zisuselwa kuzinhlolovo ezingaphezulu kwezingu-1,000 XNUMX. Ukuvuselelwa nakho kuqhutshwa ngokuqhubekayo njengombono jikelele ngokushintshwa kwenkampani, umkhiqizo noma amasevisi.
Ubani Ongasebenzisa Isici Sokulinganiswa Komkhiqizo
Izilinganiso zezikhangiso ezifaka kuhlu lomkhiqizo zilusizo kuphela kubathengisi nakubakhangisi abakhombe abathengi base-US. Ukuze unike amandla isici, abathengisi kufanele bakhethe ukwabelana yonke idatha yabo yokubuyekezwa komkhiqizo ngqo ne-Google noma ngokusebenzisa isihlanganisi senkampani yangaphandle. Imithombo evunyelwe evela eceleni ifaka phakathi IBazaarvoice, Ekomi, Feefo, Ukubuyekezwa kwePower, Reevoo, Izilinganiso zokuthengisa kabusha, Kuvunyelwe uShopper, Jikela ku, Ukubuyekezwa okuqinisekisiwe, Imibono, Yotpo.
Abathengisi kumele babe nokubuyekeza okungenani ezintathu ukuze bafaneleke. I-Google futhi inika abathengisi isikhathi esanele sokunquma ukuthi babelana ngokuqukethwe kokubuyekezwa noma ngenye indlela kusukela ngasekupheleni kukaJulayi kuya ku-Okthoba. Ngalesi sikhathi, zonke izikhangiso zohlu lomkhiqizo zizoba nesici sokulinganiswa komkhiqizo esibonisiwe kulabo abanedatha yokubuyekeza. Woza ngoNovemba, izilinganiso zomkhiqizo zizokhonjiswa kuphela uma umthengisi ekhethe ukwabelana ngezibuyekezo zemikhiqizo yazo.
Ungazivumela kanjani izilinganiso zomkhiqizo we-Google
Uma i-Google iqoqe idatha eyanele yokubuyekeza yemikhiqizo yakho, izilinganiso kufanele zivele ngokuzenzakalela kuhlu lwakho. Uma ufuna ukuqiniseka, noma kunjalo, ukuthi izilinganiso zisazoba khona ngemuva kwesikhathi somusa, futhi zingagcwalisa ifomu lezilinganiso zomkhiqizo namuhla.
Uma ibhizinisi lakho lisebenzisa ama-PLAs, leli yithuba elilodwa lokusebenzisa ngokunenzuzo. Izilinganiso ezinhle ezinamathiselwe kuhlu lwakho ziyindlela eyodwa yokuheha nokusiza abathengi ngezinqumo zabo zokuthenga. Izilinganiso ezimbi, ngakolunye uhlangothi, zingadonsela ukunaka okungako kude kakhulu nemikhiqizo yakho. Ngakho-ke khumbula ukuthi izilinganiso ziyashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ukuze uhlale uphezulu, ayikho indlela engcono yokwenza ibhizinisi kunokunikezela ngamakhasimende amahle futhi kuphela imikhiqizo emihle kakhulu. Lwela isilinganiso sezinkanyezi ezi-5 njalo nangebhizinisi lakho ukuphela kwendlela kuphakamile.
Tags: i-adwordsabathengisi be-adwordsUhlu lomkhiqizo we-adwordsibhazaEkomiFeefoi-google adwordsUhlu lomkhiqizo we-googleIzilinganiso zomkhiqizo we-googleukuthenga ku-googleUkubuyekezwa kwePowerukufakwa kuhlu komkhiqizoizikhangiso zohlu lomkhiqizoUhlu lomkhiqizoizilinganiso zomkhiqizoReevooIzilinganiso zokuthengisa kabushaKuvunyelwe uShopperJikela kuUkubuyekezwa okuqinisekisiweImibonoYotpo
Ungaluqhuba kanjani uvivinyo lwe-A / B nge-ChangeAgain